Iikhalenda zokuPrinta: Kutheni uzisebenzisa, iiNkqubo zaSimahla kunye noYilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 07/09/2021 13:00 | Izibonelelo
Ngaba ungumntu ofuna ukugcina ulawulo kunye nolungelelwaniso ukuze zonke izinto ekufuneka uzenzile zingagqibi ukukuntywila? Ngaba uyathanda ukwazi ukuba kufuneka wenze ntoni yonke imihla kwaye unamathele kuyo kunobumba? Emva koko ufuna Iikhalenda ezinokuprintwa. Zizixhobo eziguquguqukayo kakhulu, kuba ungazisebenzisa zombini ukucwangcisa imisebenzi ekufuneka uyenzile emsebenzini kunye nokucwangcisa isicwangciso sokucoca ekhaya kusapho lonke, okanye ugqibe apho uza kuya khona ngempelaveki nganye nabantwana .
Ukuba sele sibambe ingqalelo yakho, apha ngezantsi asizukukunika uyilo lweekhalenda zokuprinta, kodwa kunye neenkqubo onokuthi uzenzele ezakho kunye nezizathu zokuba kutheni kufuneka uzisebenzise, ​​nendlela yokwenza, ukuba bangaphelisi ekwaphuleni nantoni na ebhaliweyo kubo. Masiyenze?
1 Kutheni usebenzisa iikhalenda ezinokuprintwa
2 Uyisebenzisa njani ikhalenda eprintiweyo ukuze uzilungiselele kakuhle
3 Iinkqubo zokwenza iikhalenda zakho zokuprinta
4 Uyilo lwekhalenda oluprintwayo
4.1 Ishedyuli yeveki yomsebenzi wasekhaya (izifundo, umsebenzi wesikolo, njl.
4.2 Imigca engwevu 2022
4.3 Ikhalenda encinci
4.4 Ikhalenda Ethe nkqo
4.5 Ikhalenda yomsebenzi wasekhaya, ukutya ...
Kutheni usebenzisa iikhalenda ezinokuprintwa
Okwangoku usenokuba ucinga ukuba iikhalenda ezinokuprintwa zizinto zexesha elidlulileyo. Endaweni yokuprinta, kwaye ngaloo ndlela uchithe amaphepha, ungasebenzisa i-ajenda, iselfowuni okanye ikhompyuter ukugcina ikhalenda, kodwa ngaba uya kuyibona ngokuqhubekayo? Uninzi alunakuba njalo, kuba incwadi ayizukuhlala ivuliwe, kwaye iselfowuni okanye ikhompyuter ayizukubane sikrini ngekhalenda yenyanga, yeveki okanye yemihla ngemihla.
Ngamanye amagama, ngokungayiboni, uyakulibala ngayo kwaye kuphela ukuba ungumntu onoxanduva kakhulu uya kugxila ekuyizalisekiseni yonke imihla.
Zininzi izinto kunye nezizathu zokubuyela ekusebenziseni ikhalenda ukuprinta ngendlela obukade usebenza ngayo, kokubini emsebenzini nakubomi bosapho. Ezinye zazo zezi:
Ukwazi ukuhlela iveki ngayo yonke into ekufuneka uyenzile. Ayisiyongxaki yokugcwalisa yonke imihla, kuba ufuna ixesha lakho ngokwakho, kodwa kuyakwenza uzive uvelisa ngakumbi usazi ukuba unezinto ekufuneka uzenzile kwaye uyathobela.
Unokucwangcisa umsebenzi wakho kwi-Intanethi. Ukuba unayo ibhlog, iinethiwekhi zentlalo, njl. Ungayimisa into oza kuyenza suku ngalunye kuzo, ngendlela enokuthi, ukuba nangaliphi na ixesha ufuna ukwenza umsebenzi, ukwazi, kuba akukho mfuneko yokuba ucinge ngento oza kuyenza ngosuku emini, kodwa yonke into iya kube ilawulwa kakade.
Ungakhumbula amadinga onyango, imihla yokuzalwa, uhambo, imisebenzi nosapho ...
Ukuqukumbela, iikhalenda ezinokuprintwa ziluncedo kuyo yonke into yosuku lwakho. Ungayifumana eyomsebenzi wasekhaya, enye yeyomsebenzi wakho, eyokutya ... Kwaye nokuba uyibona iqhelekile, inyani kukuba umbutho uya kukunceda wenze into ekufuneka uyenzile (ke uya kuba nexesha elingakumbi ) kunye nokonga (kuba ucwangcisa kwangaphambili, onokuthi ugcine ngayo kwiindleko ezinje ngokungaphumi yonke imihla uyokuthenga).
Uyisebenzisa njani ikhalenda eprintiweyo ukuze uzilungiselele kakuhle
Khawufane ucinge ikhalenda kwikhompyuter yakho. Kuya kufuneka uyivule ngalo lonke ixesha ufuna ukubona ukuba wenzeni ngalomini, okanye yeyiphi iminyhadala okanye imisebenzi onayo kuyo yonke inyanga. Kubandakanya ukuba nekhompyuter okanye iselfowuni xa uyenzayo. Kodwa nje ukuba wenze kwaye uvale, unokulibala malunga nomsebenzi owusayinileyo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Endaweni yoko, ngoku cinga enye oyiprintayo kwaye uyishiye ibambekile kwifriji. Ngalo lonke ixesha usiya ekhitshini kwaye udlula kuloo ndawo uyakubona ikhalenda, nayo yonke into efuna ukwenziwa ngalo mhla, iveki okanye inyanga. Yi rhoqo ukukhumbuza ukuba kukho izinto ekufuneka uzenzile. Kwaye oko kuyenza isebenze ngakumbi, kuba, ngaphandle kokuba uvotele ikhitshi, liya kuhlala likho ukukuxelela ukuba kufuneka uthobele.
Ingcebiso yethu ngeekhalenda ezinokuprintwa kukuba uziprinte ephepheni. Kuxhomekeke kwimisebenzi ekufuneka uyenzile, kungcono ukuyenza yonke imihla, ngeveki okanye ngenyanga, kwaye uzame ukungadibanisi neminye imisebenzi. Umzekelo, musa ukudibanisa izihloko zomsebenzi kunye nezokutya kosapho, okanye nemisebenzi ekufuneka yenziwe ngumntu ngamnye ekhaya. Kwezo meko kungcono ukuba nekhalenda kumcimbi ngamnye.
Emva koko kufuneka yibeke kwindawo ebonakalayo kubo bonke, kwaye ebonwa ngalo lonke ixesha. Ayizukusebenza njengesikhumbuzo, kodwa iba yintuthumbo xa usazi ukuba kuya kufuneka uthobele kwaye awenzi njalo.
Iinkqubo zokwenza iikhalenda zakho zokuprinta
Ngokwenyani, nayiphi na inkqubo yokuhlela imifanekiso inokukunceda wenze iikhalenda ezinokuprintwa, kuba konke okufuneka ukwenze kukuyila ngokwakho. Nangona kunjalo, ukuba awulunganga kakhulu kuyilo, okanye awufuni ukuba lusisiseko, olunye ukhetho kukusebenzisa iiwebhusayithi kunye namaqonga aneetemplate ezikuvumela ukuba wenze iikhalenda zakho ngesiseko.
Kule meko, zonke ezi zixhobo zisimahla, kwaye kuya kufuneka uchithe ixesha elincinci ukhetha itemplate elungele eyona nto uyifunayo, uyenze ngokwezifiso kwaye uyiprinte.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi onokuzisebenzisa? Iti sinika uluhlu lwazo:
I-Freepik. Esi ayisisixhobo ngokwaso, kodwa endaweni yoko unokufumana khona itemplate zekhalenda ukuze uphinde usebenze nazo ngesandla okanye kwikhompyuter yakho.
Uyilo lwekhalenda oluprintwayo
Zininzi iintlobo zeekhalenda zokuprinta kwi-Intanethi. Inkqubo ye- Uninzi lweetemplate zisimahla, ngelixa kukho ezinye ezihlawulwayo. Kule meko, siza kugxila kwiitemplate zasimahla. Kwaye sicebisa oku kulandelayo:
Ishedyuli yeveki yomsebenzi wasekhaya (izifundo, umsebenzi wesikolo, njl.
Yikhalenda yeenyanga ezili-12 enezithebhu kwinyanga nganye ukuseta imisebenzi yeveki nganye. Ingxaki yeyokuba inomsombuluko kuphela ukuya ngolwesiHlanu, akukho zimpelaveki.
Imigca engwevu 2022
Le khalenda yonyaka ozayo iza namaphepha alishumi elinambini, inye yenyanga nganye yonyaka. Icwangciswe ngendlela yokuba ivumele bhala phantsi izinto ezithile kwisithuba ngasinye sosuku ngalunye, kodwa hayi kakhulu ugcine loo nto engqondweni.
Oku kusuka ngo-2021, kodwa ngokuqinisekileyo u-2022 uza kubhalwa kungekudala.Ngoku nje, ukuba ngumncinci unokusebenzisa ukusetyenziswa okuninzi, ukutya, ukuqeshwa kwezonyango, imisebenzi, izifundo, njl.
Ikhalenda Ethe nkqo
Olu lolunye ukhetho. Yibane umzekelo weentyatyambo (okanye ngento enxulumene nenyanga emele yona) kunye nemingxunya ukuze endaweni yokubeka iphepha ngokuthe tye, kufuneka ulibeke nkqo.
Ikhalenda yomsebenzi wasekhaya, ukutya ...
Olu lukhetho oluninzi, kwaye yinto efanayo onokuyisebenzisela yona chonga imisebenzi yasekhaya kwilungu ngalinye losapho (Ungowahlula ngombala weinki oyisebenzisayo) kunye nokucwangcisa into oza kuyitya iveki yonke.
Njengoko ubona, zininzi iindlela onokukhetha kuzo. Ngaba unazo uyilo ngaphezulu? Sazise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iikhalenda zokuprinta
Uyenza njani ikhava yangaphambili nangasemva yencwadi yakho